विचार Archives - नेपाल कुरा
विचार गृहपृष्ठमा जानुहोस् :
काठमाडौँ । मिति २०७८ असार ३० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग खुमलटारमा भेटवार्ता । मिति २०७८ असार ३१ गते नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कोटेश्वरमा भेट, लगत्तै नेपाल र प्रचण्डसँग संयुक्त भेटवार्ता । मिति[…..]
काठमाडौँ । पूँजीगत लाभ भनेको कुनै पनि पूँजीगत सम्पत्ति वा पूँजीगत दायित्वको निसर्ग गर्दा प्राप्त हुने लाभ (वा नोक्सानी भए यस्तो नोक्सानी समायोजन गरी रहेको लाभ वा थप नोक्सानी समेत) लाई जनाउँछ । सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग भन्नाले मुख्यतया यस्तो[…..]
काठमाडौँ । सवारी साधन दुईपांग्रे चारपांग्रे अधिकांस मानिसहरुको लागि दैनिक आवश्यकताको साधन बनिसकेको छ । दैनिक काममा जानु होस् वा किनमेल गर्न, घुमफिर गर्नुहोस् वा भेटघाट गर्न, बच्चालाइ स्कुल लैजान होस् वा सामान किनबेच आदि कार्य गर्न निम्ति मोटरसाइकल तथा[…..]
काठमाडौं । नेपाली बजारमा खाने तेलको मूल्य अचाक्ली बढ्दै गइरहेकोमा भने आज (सोमबार) थोरै लगाम लागेको छ । पछिल्लो एक साताबीचमा खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटरमा २० देखि २५ रुपियाँ घटेको छ । कोरोना महामारी शुरु भएयता खाने तेलको मूल्य बढ्दै[…..]
खुलस्त बताउनुहोस् सरकार ! भारतीय दोस्रो खोप जनताले कहिलेसम्म पाउँछ ?
प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार June 7, 2021 , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । नेपालमा अहिले कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका १३ लाख ६४ हजारभन्दा बढी मानिसहरु दोस्रो खोपको प्रतिक्षामा छन् । तर, कोभिसिल्ड खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले तत्काल खोप नदिने निर्णय गरेसँगै दोस्रो डोज कहिलेबाट सुरु हुने भन्नेमा सर्बसाधारणमा अन्योलता[…..]
विशेषज्ञको सुझाव : कोभिडपछि स्वास्थ्यमा यस्ता समस्या देखिए ज्यानै जानसक्छ
प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार June 6, 2021 , संवाददाता: Yukta
काठमाडौं । कोभिडको संक्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा देखा पर्नसक्ने केही लक्षणहरुलाई बेवास्ता गर्न नहुने चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । कोभिडपछिका लक्षणहरुलाई बेवास्ता गरिएमा ज्यानै जानसक्ने जोखिम रहेको भन्दै विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले बेलैमा स्वास्थ्य संस्थामा जान र आवश्यक चेकजाँच तथा परामर्श[…..]
यस्तो अवस्थामा कोही बेइमान नहोऔँ ! सबै एकसाथ लडौँ, बचौँ र बचाऔँ
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार June 5, 2021 , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । हाम्रो देश नेपाल गरिब छ र हामी सबै त्यस गरिब देशका नागरिक हौं । यस्तो गरिब देशमा पनि समयसापेक्ष चरम राजनीतिक परिक्षण भएको देख्दा एकदमै दुःख लागेर आउने गर्छ । अहिले सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो कि कोरोना[…..]
फेरियो जीवन : बटौलीको नुन र चितवनको चामल आफ्नै आँगनमा
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार , संवाददाता: Yukta
गलेश्वर । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-८ कुनइेमङ्गलेका दलबहादुर छन्त्याल ८३ वर्षको भए । उमेरले उमेरले आठ दशक पार गरे पनि गाउँले स्वच्छ खानपानले गर्दा उनी अझै हट्टाकट्टा छन् । आफ्नै रहनसहन र भाषा बोल्ने छन्त्याल निकै हँसिलो छन् । उनले जीवनका[…..]
जनतालाई रोग र भोकको पिर, नेतालाई कुर्सीको !
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार June 1, 2021 , संवाददाता: नेपाल कुरा
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुक आक्रान्त छ । एकाध जिल्लाबाहेक देशैभरी निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबारदेखि खाद्यन्न पसलहरु समेत एक सातासम्मका लागि बन्द गरिएको छ । दैनिक ७–८ हजार मानिस संक्रमित भइरहेका छन् भने सय भन्दा[…..]
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार , संवाददाता: Yukta
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद शुरु भएको छ । रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद शुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन[…..]